एसिडपीडित मुस्कान खातुनका पक्षमा हिमानीपुत्री पूर्णिका ! spacekhabar
एसिडपीडित मुस्कान खातुनका पक्षमा हिमानीपुत्री पूर्णिका ! 'जहाँ नारीको पूजा हुन्छ त्यहाँ देवताहरू पनि रमाउँछन् जहाँ नारीको सम्मान हुँदैन त्यहाँ सबै ज्ञानादी कर्म असफल हुन्छन् ।'
पूर्वयुवराज-युवराज्ञी पारश-हिमानी शाही जेठी पुत्री पूर्णिका शाह सामाजिक सञ्जालमा निकै सक्रिय छिन् ।
उनले बेला-बेला आफ्ना मनका भावनाहरु सेयर गरिरहेकी हुन्छिन् । उनलाई फेसबुकमा पछ्याउने पनि निकै छिन् । विशेषगरी संस्कृतमा स्टाटस लेख्न रुचाउने पूर्णिकाले अंग्रेजी र नेपालीमा पनि स्टाटस लेखेर आफ्ना मनका अनुभूतिहरु बाँडिरहेकी हुन्छिन् ।
राजपरिवारमा जन्मिएकी पूर्णिका निकै भावुक पनि छिन् । उनको फेसबुकको पछिल्लो स्टाटसले पनि यही जनाउँछ । उनले एसिडपीडित मुस्कान खातुनका पक्षमा बोलेकी छन् । मुस्कानको तस्बिरसहित पूर्णिकाले संस्कृतमा लेखेकी छन् ।
'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः ।
यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः ।।'
यसबाट पनि उनको मन कति कोमल रहेछ भनेर बुझ्न सकिन्छ । यसको अर्थ हुन जान्छ । जहाँ नारीको पूजा हुन्छ त्यहाँ देवताहरू पनि रमाउँछन् जहाँ नारीको सम्मान हुँदैन त्यहाँ सबै ज्ञानादी कर्म असफल हुन्छन् ।
यस्तै उनले दोस्रो हरफमा ४ लाइनको कविता पनि लेखेकी छन् । उनले मुस्कानका लागि लेखेको कविता यस्तो छ ।
'हाँस्छन् नारी जबजब यहाँ हाँस्छ यो सृष्टि आफैं
रुन्छन् नारी जब जब यहाँ रुन्छ यो सृष्टि आफैं
नारी बन्छन् जबजब यहाँ लोक देखेर क्रुद्ध
मच्चिन्छन् झन् अविदित नयाँ लोकमा क्रूर युद्ध।'
वीरगन्जको रेशमकोठीमा रहेको त्रिभुवन हनुमान उमाविमा कक्षा ९ मा अध्ययनरत वीरगन्ज १३, श्रीपुरकी १५ वर्षीया मुस्कानमाथि गएको भदौ २० गते शुक्रबार एसिड प्रहार भएको थियो ।
रसुल अलीकी छोरी मुस्कानमाथिको आक्रमणप्रति सबैले निन्दा गर्दै सहानुभूति जनाएका हुन् । मुस्कानमाथि नेपालभित्र र बाहिरबाट पनि सहानुभूति प्रकट भइरहेकै छ । बलिउड स्टर अमिताभ बच्चनदेखि बरुण धवन, नेपाली सुपरस्टर राजेश हमालदेखि क्रिकेटर पारश खड्का अनि गायक राजु लामालगायत स्टारहरुले मुस्कानको मुहारमा मुस्कान ल्याउन सान्तवना दिइरहेका छन् । यसैक्रममा मुस्कान खातुनप्रति पारस-हिमानीपुत्री पूर्णिकाको सहानुभूतिसहितका शब्द अनि उनका तस्बिर आफ्नै फेसबुक पेजबाट सार्वजनिक गरेकी हुन् । पूर्णिकाले मुस्कानलाई 'गेट वेल सुन मुस्कान' भन्दै शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामनासमेत गरेकी छिन् । उनले एसिड आक्रमण रोकिनुपर्ने बताउँदै भनेकी छन्, 'स्टप एसिड एट्याक' धन्यवाद पूर्णिका । अनि मुस्कान प्रति हाम्रो पनि सहानुभूति ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, कात्तिक २, २०७६, ०९:३२:००